Impahla yamaHindu yamadoda, ziziphi iimpahla zesiHindu eziqhelekileyo? | Ukuhamba kwe-Absolut
Kwimpahla esetyenziswa eIndiya, abavelisi abaninzi basebenzise amalaphu ohlobo kunye nemibala. Kwi iimpahla zamadoda, amalaphu alungiselelwe ukumelana nayo nayiphi na imeko yemozulu engaginyisi mathe okanye ajolise nakwiimfundiso zenkolo.
Zonke Iimpahla zamadoda e-india Bebephantsi kohlengahlengiso. Kungenxa yokuba kancinci kancinci impembelelo yamaSilamsi iye yangena kancinci kwinkcubeko yamaIndiya, iguqula kwaneendlela zokunxiba.
Impembelelo yaseMongolia Kwimpahla yaseIndiya kuyaphawulwa namhlanje iibhatyi ezibotshiweyo oko kunokubonwa namhlanje kwezinye iimpahla. Le bhatyi ibotshelelwe esinqeni ibizwa ngokuba yijama kwaye ukuba inxitywe ngeebhulukhwe, igama elipheleleyo yipijama.
Zonke Iimpahla zaseIndiya kudityaniswa nobucwebe begolide kunye nesilivere kwaye zisetyenziswa ukusuka kumakhonkco ezinyaweni okanye kumaqatha ukuya kuma-buckles kwindawo yempumlo (nangona le yokugqibela isetyenziswa kuphela ngabafazi).
Abantu abazizityebi baseIndiya bahlala benxiba izihombiso ezibengezelayos, zezona zithintela iiklasi, ngaphezulu kwelaphu eliyilo iimpahla zakho.
1 Iindidi zesinxibo samaHindu samadoda
1.5 Churidar okanye salwar
Iindidi zesinxibo samaHindu samadoda
Idhoti luhlobo lwesinxibo samaHindu esetyenziswa kwi Indawo yeBengal Kakhulu, kodwa kancinci kancinci iye yaba yingubo esetyenziswa kwiindawo ezininzi zaseIndiya.
Ingubo enomilo oxande kwaye iyilelwe ngokupheleleyo kwikotoni. Inokulinganisa ukuya kuthi ga kwi-5 yeemitha kwaye isongelwe emzimbeni.
Kwiimeko ezininzi, idhoti Luhlobo lwesinxibo esimhlophe okanye umbala wekhrimu. Ihlala isisongele esinqeni naphakathi kwemilenze. Elide, fumana ibhulukhwe elula kodwa entle nangaphezulu.
I-Khalat zizambatho zamaHindu eyilwe ngomqhaphu okanye isilika (kuxhomekeke kwindlela umntu ngamnye ayifunayo ngayo) kwaye isetyenziswa kwiindawo ezininzi zase-India. Olu hlobo lwempahla lunokunxitywa ngamadoda nabafazi ngokufanayo, kuba alunalo naluphi na uhlobo lokwahlulahlula ngokwesini.
Isinxibo esi sihlala sisetyenziswa njengewonga elibekekileyo, kanye njengengubo esetyenziswa eIndiya.
Nangona olu ayilohlobo lwempahla enjalo, ikwayinxalenye yamadoda eIndiya. Isixhobo esincinci seenjongo zokomfuziselo kuphela. Isinki ifuzisela ukuphela kwengcinezelo nokungabikho kokusesikweni.
Este Ukuhambelana kwempahla yamadoda eIndiya, inxitywe kwibhanti ebizwa ngokuba yiGatra. Ngaphambili yayilikrele elikhulu elalisetyenziswa kwimisitho, kodwa kule mihla yethu, sele ibe likrele nje elincinci ukunxiba.
Esi sixhobo asinakusetyenziswa njengesixhobo.
El Kurta Olunye uhlobo lwesinxibo samaHindu eyamadoda isuka e-Indiya eyenziwe ngehempe ebanzi nekhululekileyo edla ngokufikelela edolweni kwaye inokunxitywa ngamadoda okanye ngabafazi ngokungacacanga. Kwimeko yabasetyhini, i-kurta ifikelela ngaphezulu kwedolo.
Nangona kwixesha lokugqibela, i Kurta Ihlala inxitywe ngejean, ngesiqhelo inxitywa ngeebhulukhwe zeSalwar kunye nechuridar. Ezi bhulukhwe zibanzi, kodwa zinobungqina bokuba zinanyathiselwe kwindawo yeqatha.
Olu hlobo lwempahla lunokunxitywa njengokunxiba okusesikweni, nangona abantu abaninzi benxiba yonke imihla.
Churidar okanye salwar
El churidar luhlobo oludume kakhulu lweebhulukhwe kwaye iye yaba yinto eyahlukileyo ibhulukhwe salwar; Nangona kunjalo, i-salwar yahlukile kuba i-taper emaqatheni kunye ne-churidar taper kancinane ngaphambi kokufika, okunika ukubonakala okuhluke ngokupheleleyo, okwenza uluhlu lwemilenze lubonakale kule yokugqibela.
Ezona ndidi zeebhulukhwe zale ndlela zezona zinobuthathaka, kuba xa ziqinile, kubalulekile ukuba umntu ozisebenzisayo ahambe ngokukhululekileyo.
Lo mncedisi ubizwa ngokuba "uyolo lookumkani”Kwaye luhlobo lweshali esalukwe kakuhle apho kusetyenziswa imicu eyahlukeneyo yeenwele ze-antelope. Abaluki bolu hlobo lweeshawl ngabaluki becashmere kwaye benza imisebenzi yokwenene yobugcisa.
Ngaphambili, ezi sheyi bezizezobunewunewu bokwenyani bomntu ozinxibileyo, kuba ngenxa yemveliso yazo ebiza ixesha elininzi, ixabiso laliphezulu kakhulu. Ukongeza, kufuneka ubuchule obuninzi ukuze bakwazi ukuthunga iinwele ze-antelope ngokudibeneyo, kuba banobubanzi beemicrometer ezili-9.
Umntu owayephethe i-shawl enjalo wayenento ebiza kakhulu nexabisekileyo.
Ngaba sele icacile kuwe into eyi ezona zinxibo ziqhelekileyo zamaHindu zamadoda?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iimpahla zamadoda amaHindu
Iidyasi, iziketi, kunye neelokhwe ezingafakwanga fork zamadoda lolona khetho lufanelekileyo, kwezempilo, kwintuthuzelo nakwintlonipho. Iibhulukhwe zi-torutra ngalo lonke ixesha
Kutheni le nto besebenzisa iimodeli zamadoda ukunxiba ezo mpahla kuba bengasebenzisi amadoda okwenyani avela eIndiya
injani ilokhwe yakho
Ukusetyenziswa kwe-OVEROL, okanye iblukhwe, kukhuthaza izifo zamadoda zale mihla: ukungabi namandla, ukungabinamandla, iingxaki zeprostate, umhlaza wamatyhalarha. Akukho lungu lomzimba lamadoda lityumkileyo okanye lixhatshazwe njengamalungu esini. Zininzi izizathu ezibangela ukuba indoda inxibe izihlangu kwakhona. Ibhlukhwe ibiluphawu lokuxhatshazwa, umboniso, kunye nokuthotywa kwabasetyhini neentsana. Kungcono kakhulu, ukuba sempilweni, ukhululeke ngakumbi kwaye uhlonipheke ngakumbi, kwaye uyile izinto ezintsha, zokuba amadoda anxibe iziketi, okanye iilokhwe ezinesiketi.
Ne mibongo epholileyo yesinxibo esiqhelekileyo sinaba bantu ngaphandle kokuba intle kakhulu
Kum intofontofo kwaye intle, iimpahla ezintle, ndinqwenela ukuba ndiyisebenzise elizweni lam. Intuthuzelo kunye nempilo kuqala.
Molo utata, owokugqibela ngombala omnyama, uwa ngobuso obuhle
kukho into endiyicinga nomnye omnyama ahyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ndifuna ukukubona…
Ndiyazi ukuba ungumNdiya kancinci kodwa into enkulu ayiveli kuwe
kwaye ukuba ndingu guey yyyyyyyyyyyyyyyyy ????????????????????????
Ndifuna uyazi ukuba ulala nam ebhedini, utata umnyama !!!!!!
nyusa impempe !!!!!!!!!!!!!!!
Ungathumela amakhonkco endlela yokusebenzisa idhoti
UMaria Emilia sitsho
Iimpahla zabo eziqhelekileyo zintle kakhulu ngenxa yoxinzelelo lwendibaniselwano yazo
imibala kunye neengubo zempahla.
IINDIYA ZE-INDIA ZINENKWENKWE IPENIS JAAAAAAA
Abo basuka e-India bane …… .. Sele beyazi into abayisebenzisela yona.
Isindululo sendoda kunye nenhle kakhulu
uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy aphume ngefashoni apha eColombia kodwa ezo mpahla zipholile kwaye ezabafazi nazo
Phendula u tina
IColima Mexico sitsho
Akukho maMamen sisinxibo esikhethekileyo, esihle, esingaqondakaliyo, kwaye ke iinkosi zibukeka zinomtsalane kwaye zibangela ukonwaba. Xa amantombazana edibana ne-INDU ayichukumise kwaye baya kuziva behambela eIndiya kwaye bengqongwe ngamakhwenkwe amahle
AYONA AMADODA AQHELEKILEYO E-INDIA AKUKHO NANTSI ETHETHA NGOKUGQIBELA KWABO NDIYAYITHANDA KUKHO OKUQHELEKILEYO KULWANDLE LWE-INDIA NGAPHANDLE KOKWENZA IJEEJE
Le ixabisekileyo inika indoda umoya we-mystisism kwangaxeshanye ngobuhle, obu buhle
Ndiyazithanda iimpahla ezivela kwamanye amazwe kodwa kunzima xa ulapha eBolivia, eSanta Cruz.Ndingathanda ukuthenga ezo mpahla kunye nezinye iinkcukacha, ndingazifumana njani, nceda?
UJose Alfredo Velasco sitsho
Umntu othile uyazi ukuba ndingaluthenga phi olo hlobo lwempahla, sukufunda ukuba ivela eIndiya uqobo, kuphela ukuba ndifuna ukuthenga kwaye apha ndihlala khona abayithengisi kwaye inyani kukuba ndiyayithanda kuba ndinegazi laseIndiya. kodwa ndiyayithanda yonke into esuka eIndiya
impendulo x fas choreo yam yile earvanggogh@hotmnail.com
Ndinabahlobo baka-Indu kwaye abanxibi ngoluhlobo kodwa loo lokhwe ibonakala ilula kakhulu kum
ZINTONI IINDAWO ONOKUKWAZI UKUZE UZIBONELE UTHENGELE IIMPAHLA ZAMADODA INDU, ENKOSI
E-Barcelona kwisitalato iCasp yivenkile yendawo yeNgingqi
loo nkcubeko ayiqhelekanga
Uloyiso eddy sitsho
Iimpahla zabo eziqhelekileyo zinomdla kodwa into endingayithandiyo nge-indu kukuba bayasithanda nasiphi na isilwanyana, umzekelo iigundane.
iijj iimpahla zakho haha ​​xd xd
U-maria de los angeles sanchez alvarez sitsho
Unyana wam kufuneka aphume enxibe indu ndingayifumana phi isuti
Phendula u maria de los angeles sanchez alvarez
Kunika umdla kodwa kufuneka bachaze ngakumbi imibala ye-orijen kodwa ndiyithandile idhotiiiiiiii
ISelva de Irati, indawo enchch ukuze ulahlekelwe nguwe